Wolf iCub |
Net Entertainment uza kuwe Wolf iCub. Le isilwanyana spiral Azisekho online umdlalo, nge isuntswana twist kuyo. Njengoko unokuba ukuyichaza ngoku, umdlalo malunga Lithole ethile umqulu wolf. Nangona le Lithole angavela cute, kufuneka baqaphele oku zokupakisha umthamo omkhulu! Funda okungakumbi ngale game evela ngokutsha ngezantsi.
Ukuphila iingcuka imincili online Slots umdlalo
Lo ngumdlalo kwiindawo zokubeka online eye 20 paylines esisigxina, 3 ngemiqolo 5 namacwecwe. Alpha Lithole ye pack wolf okhangela zathabathela kwiphiko lasekhohlo udlala nje ngawe. Xa wesiqalo ngulo iqhwa ke igqunyiweyo scene ehlathini olubekwe ebusuku. Ezinye iqhwa kwakhona ukuba wehla kancinane emhlabeni kwakunye
Lo mdlalo omabini nexabiso eliphantsi kunye nemiqondiso eliphezulu-value. Amakhadi ukudlala A standard, J, K, Q, 9 kwaye 10 zenze ngeesimboli ephantsi-value. Kuba ii icon phezulu valued, ukuba nezimpawu isilwanyana eziquka ibhere, ikati ￼wild, a dlebe, isikhova kunye Cub Wolf.
Kwakhona ube icon Wazibhangisa simelwe Full Inyanga. A Print ngekhephu Ngcuka imele uphawu Wild. Uphawu lasendle liya kuthatha ezinye zonke iisimboli phezu reel, ngaphandle kwe icon usichithachithe. Kufakwe ezinye iimpawu, uya kuqinise amathuba akho kokufika yokuzuza ezihamba kunye.
The Free osebenzisa Bonus Feature Of Le Slots umculo umxokozelo
Lobo iCub has a Free osebenzisa yebhonasi isici iyasebenza xa uyakwazi lomhlaba ubuncinane weesimboli agcwayele Full Inyanga ezintathu. Abo ekwazi ukuba abe ubuncinane icons amathathu siwachithe phezu kwabo, ke dabba. Oku kuya kukhokelela kwiqela ijikelezisa ekubeni avulwe. Xa udibanisa inani ijikelezisa ezamahala wazihluba uza angambuyekeza lilonke ezamahala ijikelezisa ibhaso.
Ungasebenzisa kwakhona isebenze Blizzard Uphawu xa kukho watshisa izitha imiqondiso twatse kwi emasondweni enye. Kwelinye reel, ukuze ubone ezinye iimpawu ezifanayo. Njengoko ekwazi azisonti ezi mMn Inyanga njenge nani lo icon sasendle, kuya kwandula lifane ukuba khela ukuhlanganiswa lokuwina.
It is a eyenzelwe kakuhle kwiindawo zokubeka online umdlalo kunye imizobo ezinkulu oopopayi. Soundtrack ifanelwe ngokufanayo ekumgangatho ophezulu kwaye Ukudlala elungileyo. Ungafumana i RTP of 96.34%, ethetha ukuba xa emhandzini £ 100 uya imali eyintlawulo ye £ 96,34.